BIGO တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းကို ခံစားပျော်ရွှင်ပါ!
Giler အကန့်အသတ်မဲ့ GX30 ကို သုံးပြီး BIGO LIVE မှာ စိန်ပွင့် 15 ခု ချက်ချင်းရယူပါ!
SMS ကို သင်ရပါမည်၊ 28118 သို့ "<BIGO>အာကာသ<Your BIGO LIVE ID>" ဟု စာပြန်ပြီး စိန်ပွင့် 15 ခု ရယူပါ။ *သင့် BIGO Live ID ကို BIGO app မှာ ကြည့်ပါ။
သင်သည် နောက်ထပ် စိန်ပွင့် *100,0000 ကို ဆွတ်ခူးဖို့ အလိုအလျောက် ကံစမ်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါမည်!
BIGO LIVE ဒေါင်းလုပ်
BIGO Live စည်းကမ်း
BIGO Live ပြိုင်ပွဲ စည်းကမ်း
*စိန်ပွင့် 1,000 ကို နေ့စဉ်ကံထူးရှင် 10 ဦး ရွေးချယ်ပါမည် - ကံထူးရှင်တစ်ဦးလျှင် စိန်ပွင့် 100 ရပါမည်!
ငွေကြိုပေး GX12/ GX30 - မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ - ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ Unlimited Funz Prepaid Plan - မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ GX30 x Bigo Live Contest GX30 x BIGO LIVE Campaign 2x Hottest Spot
UMI30 ကဲ့သို့ ဖုန်းခေါ်အစီအစဉ်များကို သုံးနေပါက နေ့စဉ် အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ဘာဖြစ်မည်နည်း?
သင်၏ ဖုန်းခေါ်အစီအစဉ်များကို ဦးစွာသုံးပြီးနောက် အခမဲ့ နေ့စဉ်ခေါ်ဆိုမှုများကို ရရှိပါမည်။
Unlimited Funz Plan သည် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာများကို ဆိုရုယ်၊ ချက်တင်နှင့် ဂိမ်း app ဆယ်ခုအတွက် ပေးထားပါသည်။ ထိုအရာများမှာ အဘယ်နည်း?
အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာကို ဆိုရုယ်၊ ချက်တင်နှင့် ဂိမ်းများအတွက် ပေးထားရာတွင် Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat, IMO, Viber, Facebook Messenger, Mobile Legends နှင့် PUBG (“App နှင့် ဝဘ်”) တို့ ပါဝင်ပါသည်။
App နှင့် ဝဘ် အတွက် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း?
RM10 ငွေဖြည့်မှု တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်လိုက်ပါ၊ App နှင့် ဝဘ် အတွက် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို ချက်ချင်း ရပါမည်။ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို App နှင့် ဝဘ် အတွက် ဆက်လက်ရယူရန် ငွေဖြည့်ပြီး သက်တမ်းတိုးပေးပါ။
အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက် ကိုယ်တာ ကုန်သွားပါက ငွေကောက်ခံပါမည်လား?
မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင်သည် မည်သည့် အင်တာနက်ကိုမျှ သုံးမရနိုင်တော့ပါ။
Apps ဆယ်ခုအတွက် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို မိုဘိုင်းဖုန်း ဟော့စပေါ့မှတစ်ဆင့် မိတ်ဆွေများနှင့် မျှဝေနိုင်ပါသလား?
အခမဲ့ အင်တာနက် သက်တမ်းမှာ အဘယ်နည်း?
အခမဲ့ အင်တာနက် သက်တမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
အခမဲ့ အင်တာနက် အစီအစဉ်များ
စတင်သုံးလျှင် ရမည့် အခမဲ့ အင်တာနက် (200MB)5ရက် (Unlimited Funz Plan စတင်သုံးပါက)
အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက် လတစ်လ၏ 1 ရက်နေ့တွင် ပြန်စမည်
ခရက်ဒစ် လက်ကျန်ကို မည်သို့ စစ်မည်နည်း?
*118# ကို ခေါ်ပြီး ခရက်ဒစ် လက်ကျန်စစ်ပါ။
အခမဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများကို မည်သို့ စစ်မည်နည်း?
UMB မှ *118*6*3*1# သို့ ခေါ်ပြီး သို့မဟုတ် MyUmobile App မှ စစ်နိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ အင်တာနက် ကိုယ်တာ လက်ကျန်ကို မည်သို့ စစ်မည်နည်း?
UMB မှ *118*6*3*2# သို့ ခေါ်ပြီး သို့မဟုတ် MyUMobile App မှ တစ်ဆင့် စစ်နိုင်ပါသည်။
Unlimited Funz Plan သို့ ပြောင်းပါက ခရက်ဒစ်လက်ကျန် (ရှိခဲ့လျှင်) ဘာဖြစ်မည်နည်း?
ပြောင်းရွှေ့ခ RM3 နှုတ်ယူပြီးပါက သင်၏ ခရက်ဒစ်လက်ကျန်ကို ဆက်လက် သယ်ယူသွားပါမည်။
50% off Service Fee for MaxMoney Remittance Service Campaign Giler အကန့်အသတ်မဲ့ ငွေကြိုပေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ Unlimited Funz Prepaid Plan စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ GX30 with BIGO LIVE Awareness Campaign GX30 with BIGO LIVE Contest 2x Hottest Spot